Oluzenzekelayo Steel Pipe Ukupakisha And wayibopha Machine - China Wan Run Da High Tech
Zenzekelayo Steel Pipe Ukupakisha And wayibopha Machine
Ukupakisha esizenzekelayo wayibopha Machine Ngokuba Pipe Mill Lo matshini isikhululo lokugqibela kumgca steel kumbhobho lokusila. Oku zisetyenziselwa ingqokelela, ukuqokelela nokupakishwa Imibhobho ephakathi yentsimbi, ngoko, lo mqulu uya kuthumela kuyo yokugcina. Wonke lamanyathelo, ezifana ezinjengokubala, Bawafumba umaleko, ukufumba lugqityiwe ngokuzenzekelayo. Wayibopha strip iqhiya umbhobho kunye ukuwelda zephetshana iqhiya zenziwa ngokuzenzekelayo, ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo. Zombini ivale isiqingatha-automatic kunye umatshini wayibopha kwaye oluzenzekelayo umatshini ivale elipheleleyo Aba ...
Ukupakisha esizenzekelayo Machine wayibopha For Pipe Mill
Lo matshini isikhululo lokugqibela kumgca steel kumbhobho lokusila. Oku zisetyenziselwa ingqokelela, ukuqokelela nokupakishwa Imibhobho ephakathi yentsimbi, ngoko, lo mqulu uya kuthumela kuyo yokugcina. Wonke lamanyathelo, ezifana ezinjengokubala, Bawafumba umaleko, ukufumba lugqityiwe ngokuzenzekelayo. Wayibopha strip iqhiya umbhobho kunye ukuwelda zephetshana iqhiya zenziwa ngokuzenzekelayo, ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo.
Zombini ivale isiqingatha-automatic kunye umatshini wayibopha kwaye oluzenzekelayo umatshini ivale elipheleleyo llehla ingxolo pipe-exabela, nayo ukunciphisa inxeba umphezulu okubangelwa abakugwayimbo.
Wamkelekile ukufumana umgangatho ophezulu intsimbi oluzenzekelayo umbhobho zopakisho umatshini wayibopha kuthi. Thina enye eziphambili abenzi China nababonelela oomatshini ezahlukeneyo mveliso. Wamkelekile ukukhangela uluhlu lwamaxabiso kunye nekoteyishini kunye nathi.
Previous: Flying Saw Hot For Steel Pipe And Tube
Next: ERW Straight komphetho Round Pipe Mill Line
Zenzekelayo Umatshini wayibopha umenzi China umbhobho intsimbi oluzenzekelayo zopakisho umatshini wayibopha
izixhobo ivale oluzenzekelayo umbhobho intsimbi
pipe oluzenzekelayo / ityhubhu wayibopha / line ezweni ukuba
line ingqokelela Automatic
steel oluzenzekelayo machine kumbhobho ukuphakheja
machine ezweni Automatic
tube Automatic machine ukuphakheja
China machine pipe wayibopha
pipe steel China kumatshini ivale oluzenzekelayo
umatshini Full nokupaka kumbhobho steel oluzenzekelayo
Pipe machine nokupakishwa
Semi ngokuzenzekelayo umatshini wokupakisha kumbhobho intsimbi
Semi-oluzenzekelayo machine umbhobho ukuphakheja
Semi-oluzenzekelayo machine Tube ukuphakheja
Steel line pipe ingqokelela
Steel pipe ingqokelela / Umatshini ukuphakheja
Steel line tube ingqokelela
Tube machine nokupakishwa
Steel Pipe wayibopha Machine
Steel Pipe Automatic Ukupakisha System
Half-oluzenzekelayo Ukupakisha ke wayibopha Machine For ...
Factory Lixabiso Hot Steel Pipe / ityhubhu yokugoqa Mach ...
EZIZENZEKELAYO Pipe nokupakisha / KOMATSHINI wayibopha